Shiinaha caaga Ratten caaga warshad caaryada iyo saarayaasha | HEYA
SOO SAARAHA MADASHA BULSHADA
Maxaad noo doorataa
Qashinka Can Qaab
Qaababka Kale ee Qoyska
Qaadada / Fargeeto / mindi Qaab
Caaryada Qafiifka ah
Qalabka jikada wasakh kale
Qaab Qalabka guriga
Warshadaha iyo Beeraha Qaab
Weelasha Ubaxa Caaryada
Auto Qaybaha Qaab
Caaryado Aan Xabad Lahayn
Caaryada Guddoomiyaha Xeebta
Qaab dhismeedka Guddoomiyaha
Qaab duritaanka Kursiga
Wasakhda duritaanka Kuraasta banaanka
Caaryada Guddoomiyaha caaga
Caaga Ratten caaga Qaab
Qaab caaga Ratten caaga ah ayaa iska leh caaryada gudoomiye ka ah caarada caaga ah ee caaga ah. Marka loo eego noocyada kala duwan ee wax soo saarka, Moodka Mashiinka waxaa loo qaybin karaa qaab dhaqameed iyo qaab shaqsiyeed, sida wasakhda ku samaysanta kursi caag ah, isku laabidda soo saaraha caaryada cirbadaha, caaryada kursi xeebta, iwm.
Taizhou Heya Mold Co., Ltd waa aalad warshad u dhinta oo loogu talagalay Guddoomiye Qaab sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Waan aqbalnaa OEM & waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan shaybaarrada, ama qeyb sawir ah, ama sawirrada tusaalaha ah.
Oraahda ayaa labadiinaba ku qancin doonta tayada caaryada iyo qiimaha caaryada.
Waxaan rajeyneynaa wada shaqeyn adag oo aan kula yeelanno.
Waxyaabaha soo socdaa waa macluumaadka ugu muhiimsan ee tixraacaaga ：
Magaca Badeecada Caaga Ratten caaga Qaab
Qaab dhismeedka Shiinaha kartoo caaryada duritaanka balaastigga ah
Bir caaryo ah S45C, P20H, 718H, 2738, S136, H13 iwm
Alaabta Material PP, PC, PS, PAG, POM, PE, PU, ​​PVC, ABS, PMMA, iwm
Saldhig caaryada LKM, ISM, HASCO, DME
Saabka Hal / Meelo badan sida macaamiisha u baahan tahay
Nolosha caaryada 300,000 ~ hal milyan oo tallaal
Nooca Orodyahanka Orodyahan / Qabow orodyahan
Nooca albaabka Albaabka Pin -point, Albaabka Gujisyada badda hoostiisa mara, albaabka dhinac, iwm
Waqtiga dirida 30 ~ 60 maalmood
Baakadaha Xaaladaha looxa ee caadiga ah
Gaadiidka Badda ama hawada sida macaamiisha looga baahan yahay
Dhoofinta Dunida oo dhan
Nooca ugu weyn ee birta ah iyo adayga adigu tixraac ahaan:
Fasalka Birta S50C P20 P20HH 718H 2738H H13 S136 NAK80
Engegnaantiinna (HRC) 17-22 27-30 33-37 33-38 36-40 45-52 48 ~ 52 34-40
S: Ma waxaad ka ganacsataa shirkad ama soo saare?
J: Heya Mold waa warshad caag samaysa.
S: Sidee loo aadaa warshaddaada?
J: Waad ku iman kartaa warshadda Heya Mold duulimaad, tareen iyo bas.
Waxaa jira qiyaastii 2 saacadood duulimaad ka imanaya Guangzhou kuna socda magaalada Taizhou; 3 saacadood tareenka xawaaraha degdega ah ee ka imanaya Shanghai ilaa saldhigga Taizhou; 1 saac tareen ka socda Ningbo ama Wenzhou ilaa saldhigga Taizhou. 3 saac bas ama tareen laga raaco Yiwu ilaa saldhigga Taizhou.
S: Macluumaad noocee ah ayaa looga baahan yahay sheegista caaryada?
J: Waxay kuxirantahay badeecadaada, sidaa darteed ku soo dhawow inaad laxariirto Heya Mold si aad ugu qirato. Sababta, way fiicantahay haddii aad hayso macluumaadkan sida hoos ku xusan:
1, Sawir sawir ah oo leh cabir ama 2D / 3D naqshad
2, Tirada godadka
3, Nooca Orodyahanka, qabow ama kulul
4, Nooca birta caaryada, P20, 718, 2738, H13, S136,2316, iwm.
5, Qalabka mashiinka duritaanka ama cabbirka saxanka (masaafada usheeda dhexe)
1) Naqshadeynta Alaabta & Qaabeynta
Heya Mold wuxuu horumarin doonaa oo naqshadeyn doonaa badeecooyinka & caaryada sida ku xusan shuruudaha macaamiisha 'kooxdeena khibradda leh ee R & D. Waxay ka caawin doontaa macmiilkeena ku jira horumarinta wax soo saarka cusub, iyo keydinta kharashka mashaariicda cusub. Faahfaahin dheeraad ah, fadlan la xiriir iibkeenna iibka ah wakhti kasta.
2) Falanqaynta Qaab-socodka
Heya Mold wuxuu sameyn doonaa falanqeyn ku saabsan caaryada-socodka sida ku xusan codsiyada macaamiisha, iska ilaali wixii dhibaato dheeraad ah ee soo-saarka caaryada.
3) Waxsoosaarka caaryada
Heya Mold ayaa macaamiisha u cusbooneysiin doonta qalabka caagga ah ee caaga ah ee soo gudbiya warbixinnada asbuucii sida caadiga ah. Xaalad gaar ah, isla markiiba waan kula soo xiriiri doonnaa.
Heya Mold wuxuu siiyaa macaamiil sawir gacmeedyo dhameystiran iyo qaybo dayactir ah macaamilka kahor rarka. Qalabka dayactirka ee caadiga ah, waxaad tixraaci kartaa liistadayada oo aad ka iibsan kartaa suuqaaga.
5) Sawirro & Muuqaalo
Heya Mold ayaa kaydin doona dhammaan qaab-dhismeedkaaga fiidiyowyada soconaya muddo 1 sano ah. Waxaan kuu soo diri doonnaa sawirro iyo fiidiyowyo kormeer ah ama tixraacaya caaryada socota.
6) Adeeg & Isgaarsiin
Heya Mold ayaa xiriir dhow idinla yeelan doona inta hawshu socoto oo dhan, laga bilaabo isgaarsiinta farsamada ee marxaladda hore ee mashruuca ilaa la-socoshada waqtiga dhabta ah inta lagu gudajiro wajiga soo-saarista ee mashruuca, ilaa iyo gadaal-iibinta taageerada farsamo ee alaabada .
Hore: Wasakhahaasi Gudoomiyaha caaga Stackable
Xiga: Caaryada Guddoomiyaha caaga
Wasakhahaasi Gudoomiyaha caaga Stackable
No.3, Houshi Road, Beicheng Street, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, Shiinaha, 318020